18 Faa'iidooyinka Caafimaadka Cusub ee Cajiibka ah marka lagu raaxeysto Khamriga Faransiiska
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Khamriga & Ruuxa » 18 Faa'iidooyinka Caafimaadka Cusub ee Cajiibka ah marka lagu raaxeysto Khamriga Faransiiska
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • kariska • dhaqanka • Wararka Faransiiska • Caafimaadka Warka • News • Dalxiiska • Daalacanayo Hadda • Khamriga & Ruuxa
Cabbitaanka galaas Khamri Faransiis ah maalintii waxay ka caawin kartaa Alzheimer, Cancer, Memory Loss, Cufnaanta Lafaha, Indhaha Caafimaadka qaba, Kolestaroolka sare, cudurka beerka, istaroogga, niyad -jabka, godadka, hargabka caadiga ah. Waa tan sababta:
Jeeg galay qaboojiyaha iyo kabadhada khamriga iyo GRRRR. Dhalooyinka waa BADAN yihiin!
Waxaan rabaa galaas khamri ah (laga yaabee waxoogaa ka badan) - laakiin hubaal ma aha dhalo. Maxaa la sameeyaa?
Isku qas gin iyo tonic ama dhagaxa dhagaxa, ama u degso Cunto Cunto (marna ma noqon karto beddel macquul ah)?
Ku dhawaad ​​laba sano, waxaan ku xidhnaa meel bannaan oo u muuqata inay yaraato, daqiiqadba daqiiqad. Saacadda kombiyuutarkaygu waxay u muuqataa mid aad u gaabisa, waxayna qaadataa weligeed in la gaaro waqtiga si rasmi ah loo JOOJIYO. Ugu dambayn, waa 5 PM, wakhti ku habboon in la xidho oo la furo dhalo khamri Faransiis ah.
Sawirada Khamriga Faransiiska
Waxaa jira heerar badan oo raaxo leh oo la xiriira ka fikirka khamriga Faransiiska: chateaux -kii hore ee quruxda badnaa, canabkii cagaarka ahaa ee cagaarka ahaa; geedo canab ah oo ka laalaada canab ka soo burqanaya awood; macaan cusub, iyo hawo hawo leh oo leh bacrin dabiici ah; guuxa shinnida goosata nectar si ay u quudiyaan shaqaalahooda.
Ka dibna, waxaa jira khamrigii laftiisa. Koobabkii Faransiiska aad bay u yar yihiin khiyaanada - waxaad jeceshahay waxaad sankaaga ku dhufato, carrabkaaga ku duubto, afkaaga si kooban ugu dheeraato, oo ka tagto xusuus si dhakhso leh u soo booqata oo dabadeedna si tartiib ah u baaba'da… aadan samayn.
Qarniyo badan, khamriga Faransiisku waxa uu ahaa mid dunida oo dhan laga hamuun qabay, la ixtiraamayey, la cuni jiray. Fikradda Faransiiska ee “argagaxa” waxaa ku jira wax kasta heerkulka aagga ilaa aashitada ciidda - dhammaantood waxay si weyn u saameeyaan oo u saameeyaan tayada, dhadhanka, urta, iyo dhadhanka canabka loo isticmaalo soo saarista khamriga.
Taariikhda oo dhan, isirrada deegaanku waxay saameeyeen khamriga, laga bilaabo kululaynta adduunka ilaa warshadaynta, iyo dhaqdhaqaaqa dadka, ilaa dhacdooyin aad u tiro badan oo aan kala go 'lahayn oo aan la xakamayn karin. Waqtigan xaadirka ah, caqabadaha horyaalla kuwa khamriga sameeya waxaa ka mid ah canshuuraha, dib-u-dhaca shixnadaha, yaraanta weelka, imaanshaha goor dambe, is-beddellada lacagta, iyo “maroodiga qolka ku jira,” COVID-19. Iyada oo dhammaan arrimahan ay wajahayaan ganacsiga khamriga Faransiiska, oo ah warshad ay ka shaqeeyaan ku dhawaad ​​558,000 oo shaqaale ah (2017), dadku waxay ka baqayaan in beero canab badan oo qoys oo yaryar aysan u adkaysan karin caqabadaha hadda jira ama midkoodna u dhow ama ka iibiya kuwa soo saara khamriga waaweyn.
Xaqiiqda naxdinta leh ee suuqa khamriga ee Faransiiska waxay ahayd wax lala yaabo maadaama suuqa khamriga wanaagsan uu ku badan yahay Faransiiska, iyadoo Bordeaux iyo Burgundy lagu kala xisaabtamayo siday u kala horreeyaan ku dhawaad ​​50 boqolkiiba iyo 20 boqolkiiba dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee 2019 (Live-ex. com). Nasiib wanaag, waxaa jira war wanaagsan - qeybtii hore ee 2021, Faransiisku wuxuu dhoofiyay 7.3 milyan oo hectoliters oo khamri ah oo lagu qiimeeyay 5.1 bilyan oo Yuuro oo ka dhigan kororka 15 boqolkiiba mugga iyo 40 boqolkiiba qiimaha marka la barbar dhigo lixda bilood ee ugu horreeya 2020, . Dhoofinta khamriga ee Faransiisku waxay ka sarreeyaan kuwa intii lagu jiray mawjaddii ugu horreysay ee COVID waxayna ku soo noqonayaan heerar koritaan oo ka sarreeya bandhigyadii ka hor COVID.
Suuqa Ameerika wuxuu mar kale iibsanayaa khamri Faransiis ah tan iyo markii la laalay canshuuraha Trump/Airbus ee weli khamriga, in aan la xusin dhoofinta khamriga dhaldhalaalaya, oo ay ku jiraan Champagnes. Bishii Abriil 2021 Faransiisku wuxuu dhoofiyay 221,000 hectoliters oo khamri ah oo lagu qiimeeyay 208 Euro taas oo u dhiganta 90 boqolkiiba mugga iyo 131 boqolkiiba kororka qiimaha marka la barbar dhigo Abriil 2020 (vitisphere.com).
Faa'iidooyinka Khamriga Cabitaanka
Waa wax layaab leh oo lagu kalsoonaan karo in la ogaado in cabbitaanka galaas khamri Faransiis ah ay u fiican tahay caafimaadkeyga maadaama canabku uu yahay isha faa'iidooyinka badan. Khamrigu wuxuu bixiyaa manganese, potassium, birta, fosfooraska iyo Vitamin B6. Waxa kale oo ku jira magnesium, macdan kaa caawin kara hoos u dhigidda cadaadiska dhiigga iyo heerarka sonkorta dhiigga, yaraynta halista wadne xanuunka, macaanka, iyo istaroogga. Antioksidanter -ka ku jira khamrigu wuxuu la dagaallamaa dhaawaca unugga ee jidhkeenna oo ay sababeen gabowga iyo arrimaha deegaanka sida wasakhowga iyo hab -nololeedka. Ka -hortagga iyo dib -u -noqoshada unuggan waxyeellada cuntada ay ku badan tahay antioxidants waxay yareyn kartaa halista ah inay yeeshaan cudurro dabadheeraad ah oo ay ku jiraan kansarka.
Faransiiska khamrigu waa daaweyn cajiib ah loogu talagalay dadka cuntada cuna maadaama ay ku jiraan 121 kalori oo keliya 150 mililiter oo khamri cad ah iyo kabashooyin dhexdhexaad ah ayaa kor u qaadi kara caafimaadka kelyaha, waxayna ka ilaalin karaan cudurka Alzheimers. Khamriga cas (oo leh 127 kalori) wuxuu ka kooban yahay fiitamiin iyo macdan badan wuxuuna ka kooban yahay ku dhawaad ​​10 jeer tirada polyphenols (xeryahooda dhirta ee leh astaamaha antioxidant) sida khamriga cad.
Sidaas - waxaa jira war iyo war wanaagsan. Khamriga Faransiiska ayaa laga heli karaa USA oo kaliya ma dhadhamiyaan wanaag, laakiin sidoo kale waxay u fiican yihiin caafimaadkayga.
Si kastaba ha ahaatee, weli waxaan qabaa dhibka cabbirka dhalada. Dhalo ay ku jirto 25 wiqiyadood oo dareere ah ayaa hadda si ballaaran loo aqbalay inay tahay halbeegga khamriga. Dhawaan, dhalooyinka yaryar ayaa si ballaaran loo heli karaa. Saamaynta dhalooyinka yaryar ku leeyihiin isticmaalka lama garanayo inkasta oo dhalada yar ay awood u leedahay inay hoos u dhigto isticmaalka iyadoo kordhineysa dadaalka loo baahan yahay in la furo oo la cuno in ka badan hal dhalo. Dhalooyinka yaryar ayaa waliba kordhin kara isticmaalka iyagoo yareynaya carqaladaha sidaas darteedna waxay kordhiyaan soo noqnoqoshada dhacdooyinka cabbitaanka. Xaddiga khamriga ee lagu hayo dhalooyinka yaryar waxaa laga yaabaa in loo arko mid aad u yar. Cilmi -baaristu waxay soo jeedinaysaa in soo -gaadhista muuqaalka ee cabbirka qaybta weyn ay wax ka beddeli karto aragtida waxa ka kooban qayb “caadi ah”. Haddii dhalooyinka yaryar loo arko inay aad u yaryihiin, tani waxay si ulakac ah u horseedi kartaa khamri xad -dhaaf ah, maaddaama dhalooyinka dheeraadka ah la furo oo la wada bakhtiyo xilliga cabbitaanka.
La helay Jawaabta
Warka fiicani waa in khamriga LGV lagu heli karo 6.3 wiqiyadood oo dhululubo caag ah (8 inji oo dheer, dhexroor waxyar ka badan 1 inji oo leh dabool fur), oo bixiya waxoogaa ka badan celcelis ahaan lagu shubay galaas khamri ah kabbashada ugu fiican markaan keligay fadhiyo shaashadda kombiyuutarkayga, anigoo isku dayaya inaan soo jeedo inta lagu jiro kulanka Zoom.
In kasta oo cabbirka hal-adeeggu uu ii yahay dhiirrigelin ii ah in aan ku keydiyo khamri casaan iyo khamri LGV ah kabadhka khamrigayga oo aan ku qaboojiyay qaboojiyaha, waxaan rabaa in aan cabbo khamri aad u wanaagsan ama ka fiican wax kasta oo lagu heli karo cabbir weyn.
War badan oo wanaagsan. LGV waxay iskaashi la sameysay khamriyo badan oo ay hoggaaminayeen ama si wadajir ah u hagayeen haween, oo ay ku jiraan Elisabeth Prataviera (Domaine de Menard & Haut-Marin), Ines Andrieu (Domaine de Caylus) iyo Martine Nadal (Domaine Nadal Hainaut)-dhammaantood waxay la xiriiraan beero canab ah oo dabiici ah oo ku dhaqma si waara beeraha.
Iyada oo dhalooyin caag ah oo cabbirkoodu yar yahay, khamriguhu aad bay ugu qumman yihiin, dhiirri -gelinta tijaabinta iyo sahaminta casaan, caddaan iyo khamriyo ka yimid soo -saarayaasha khamriga.
1. Ines Andrieu. Domaine Caylus Rose Blend
Laga soo bilaabo qaybta koonfureed ee Faransiiska (Pays d'Heralult-qayb ka mid ah gobolka Languedoc-Roussillon), kani waa jacayl marka hore khamri casaan ah oo midabkeedu yahay midabka cas (waxaan ka sawiri karaa jiilaal xagaaga ah oo ah coral/casaan jilicsan). Udugga ayaa sankayga ka farxiya maadaama uu bixinayo tilmaamaha strawberry iyo liinta. Dhadhanka ayaa ku faraxsan talooyinka tufaaxa, cananaaska iyo raad -raac uunsi. Ku habboon cabbitaanka barkadda marka qorraxdu dhacdo oo maydhayaasha dib u guraan si ay ugu diyaargaroobaan casho.
2. Gerard Damidot. Chateau Val d'Arenc Bandol 2020. Isku darka Mourvèdre (boqolkiiba 80), Grenache (boqolkiiba 10) iyo Consault (boqolkiiba 10).
Waxay ku taal Provence (baas buur, Quartier Val d'Arenc), hantida waxaa maareeya Gerald Damidot (oo ka yimid Burgundy) oo u beddelay beerta canabka ah dhaqannada beeraha dabiiciga ah (2015) oo geeddi -socodkani si togan u saameeyo tayada canabka. Ciidda beerta canabka ah waxay ka kooban tahay nuurad, fossils, marl ciid ah, dhoobo marly ah iyo sariirta dhagaxa leh oo aan lahayn sunta cayayaanka ama kiimikada meel kasta; hawlaha goynta iyo goosashada waxaa lagu dhammeeyaa gacanta. Bandol waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay kan ugu wanaagsan Faransiiska oo si joogto ah uga sarreeya 90 dhibcood.
Bandolku wuxuu indhaha u soo bandhigaa midab casaan ah oo beige ah, wuxuu sanka ka siiyaa gariir cad oo miro guduud ah, strawberry, liin iyo liin sanka, halka berry iyo liin -macaanku dhadhamiyaan dhadhanka. Aashitada dhalaalaysa oo dabaysha leh ayaa ka dhigaysa BFF -ta ugu fiican saladhyada, quiche, bouillabaisse, iyo qabowyada digaagga duban ee qabow.
3. Elisabeth Prataviera. Domaine de Menard. Sauvignon Blanc (boqolkiiba 100) 2020.
150 hektar oo beero canab ah ayaa ku yaal tuulada yar ee Gondrin, oo ku taal agagaarka IGP ee Cote de Gascony oo ku taal argaggixisada qadiimiga ah halkaas oo canabyada lagu beeray qoto-dheer, dhagaxa, ciidda hodanka ah ee hodanka ah iyadoo la adeegsanayo kaliya bacriminta dabiiciga ah. Goosashada waxaa la dhammaystiraa habeenkii ama subaxdii hore.
Rafcaanka indhuhu wuxuu ku dhow yahay biyo macaan oo cad oo dahab ah. Ka fikir ubaxyada iyo miraha (gaar ahaan canabka, tufaaxa, iyo liinta) oo sanka u keena udgoon u eg gu '. Ubaxyo ka badan kuwa miro -duubka leh ayaa ku dahaadha dhaldhalaalka leh layaab layaab leh iyo dhammaystirka aashitada. Kufiican cunnada gu'ga iyo xagaaga oo leh salmon iyo dabada lobster-biyo qabow ama ku raaxayso "kaligaa istaag."
4. Martine iyo Jean-Marie Nadal. Martine Nadal. Nadal-Hainaut. Cabernet Sauvignon (boqolkiiba 100) 2019.
Jean Marie Nadal waa jiilkii shanaad ee ku yaal guryaha oo leh 43 hektar oo lagu beeray geedo canab ah wadnaha Languedoc-Roussillon (laga bilaabo 1826). Maadaama uu yahay milkiilaha iyo khamri -cabista, Nadal wuxuu taageeraa beeraha waarta wuxuuna 2010kii u beddelay hawlgalkii beeraha dabiiciga ah. Canabka ayaa la goostaa subaxa hore waxaana lagu kala soocaa gacanta ka hor inta aan lagu ridin haanta. Ku da 'ah foosto cusub oo geedkii Faransiiska ah.
Haddii midab guduudan oo mugdi ah uu soo jiito indhahaaga iyo udugga jeeriga madow ee bislaaday iyo qoryaha qoyan (qotada dheer ee kaynta), blackberries la qalajiyey, plomme iyo miro guduudan oo mugdi ah ayaa madadaalin doona afkaaga, oo keenaya tannins geesinimo leh… waa fikraddaada khamri macaan, waxaad noqon doontaa xero farxad leh oo leh waayo -aragnimada dhadhankan. Ku lammaan hilibka lo'da, hilibka lo'da ama baastada.
5. Laurence iyo Stephane Dupuch. Peyredon Crus Bourgeois Haut-Medoc 2019. Isku darka Cabernet Sauvignon (boqolkiiba 63), Merlot (boqolkiiba 37).
Crus Bourgeois waa kala soocidda khamriga ee Bordeaux, France oo la bilaabay 1932 oo dib loo bilaabay Febraayo 20, 2020. Waxay si gaar ah u dabooshaa khamriyo guduudan oo laga soo saaray siddeed codsi oo ku yaal Bangiga Bidix ee Medoc ee aan la xiriirin kala -soocidda khamriga 1855, laakiin hadda loo arko “heer sare”. Kala soociddan ayaa la cusboonaysiiyaa shantii sanaba mar.
Beeraha canabka ah 24-acre waxay ku yaalliin Poujeaux. Midabada Garnet -ku waxay abaal -mariyaan isha halka sanka lagu maaweeliyo miraha dhagaxa, rooti cusub iyo uunsi khafiif ah. Guryuhu wuxuu soo saaraa khamriyo geedkii Faransiiska ahaa oo leh codad madow-currant caadi ah iyo sidoo kale tilmaamo vanilj, tubaako, blackberries, plomme iyo maqaar. Ku lammaan hilibka lo'da, doofaarka iyo hilibka la dubay.